Fouga Zephyr FSX Akambano v2.0 - Rikoooo
Nosedraina OK niaraka FSX Manafainganana + FSX-SE
Mpanoratra: Nalaina tahaka avy ny RESTAURAVIA ekipa miaraka amin'ny fiaraha-miasa ny Royale FRANTSAY Tafika an-dranomasina (RFN)
Ny Fouga Zephyr avy amin'ny roa configurations:
- A "Solo" fanahafana (tokan-mpanamory napetraka teo anoloan'ny seza)
- Configuration roa "DC" miaraka aminà fiaramanidina anankiroa. Ity dikan-teny ity dia natao manokana amin'ny fampiasana amin'ny safidy "Cockpit Shared" FSX.
Maro fahasamihafana eo amin'ny tena fiaramanidina sy ireo ohatra dia nampidirina mba ho mora kokoa ny fampiasana ny virtoaly mpanamory:
- Ny orona no steerable gearwheel raha ny tena Fouga dia steered amin'ny tany amin'ny freins
- Ny GPS, ny Vor / DME, ny TACAN sy mandeha ho azy dia nampidirina ao mpanamory roa modely
WARNING! Ity 2 ity dia natsangana ho an'ny FSXHaingana. Tsy mifanaraka amin'ny Flight Simulator 2004 (FS9). Ny mifanaraka amin'ny dikan-teny hafa FSX(SP1 - SP2) tsy azo antoka.
Tsy filaza mandidin 'ny mamaky ny boky tafiditra amin'ny fonosana ity anisan'izany ny iray izay mampianatra anao ny fomba an-tanety amin'ny mpitondra sambo (tena ahalalan-javatra)
Ity misy lahatsary fohy fampidirana avy Amentiba
Tsy toy ny malaza toy ny "grand-rahalahiny", ny Fouga Magister fiaramanidina, ny Fouga Zephyr dia ny tafika an-dranomasina dikan-tenin'ny Fouga. Tany am-piandohana ny dimampolo, ny Frantsay Navy manam-pahefana, fikarohana ny fomba-pirenena ho an'ny hampiofana ny mpitondra sambonao, dia tena liana ny Fouga fandaharana amin'ny fandrosoana ho an'ny Frantsay Air Force. An mifanaraka amin'ny tafika an-dranomasina Version Malagasy Bible Society fepetra arahana natao sy tamin'ny Jolay 1956 31, voalohany CM170M Fouga nitranga fahiny, antsoina hoe "Esquif", nanao ny sidina voalohany. Ny fividianana ny 30 aircrafts dia nampahafantarina sy ny lahateny dia elanelan'ireo teo anelanelan'ny 1959 sy 1961. Izany no tokana mba fividianana fiaramanidina ity dika anarana CM175 "Zephyr" araka ny tafika an-dranomasina frantsay hafa aircrafts amin'izao fotoana izao (Aquilon, ALIZE) mampiasa rivotra 'anarana. Ary ny Fouga Zephyr nampiasain'ny tafika an-dranomasina ny Frantsay, indrindra amin'ny Foch sy ny Clemenceau mpilanja. Nandritra ny telo-polo taona mahery, ny Zephyr nampiseho ny azo itokisana sy ny robustness toetra eo ambanin'ny toe-piainana mafy fampiasana.
An aerobatic ekipa manidina Zephyr noforonina tao 1961 avy amin'ny tafika an-dranomasina frantsay
Toa tena mitovy amin'ny Fouga Magister fiaramanidina, na izany aza ny Zephyr dia miavaka amin'ny fiovana manan-danja.